Tottenham waxay muujisay in ay "maarayn karto" ciyaaraha heerka sare ah - BBC News Somali
Tottenham waxay muujisay in ay "maarayn karto" ciyaaraha heerka sare ah
18 Oktoobar 2017
Kooxda Tottenham Hotspur waxay muujisay in ay maarayn karto ciyaaraha ugu heer sarreeya, sida uu sheegay Harry Kane, ka dib markii ay kooxdiisu la ciyaartay Real Madrid oo ay isku arkeen koobka Horyaallada Yurub.
Hal dhibic ayay ka heleen waxayna u tahay tallaabo ay horay ugu qaadeen u soo bixitaanka wareegga ciddii laga badiyo ay harto.
Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Bernabeu ayaa ku soo dhammaatay barbaro hal iyo hal ah.
Kooxdan horyaalka Ingiriiska ka dheesha ayaa goosha la hormartay ka dib markii oradkii xariifnimada ahaa ee Kane uu ku qasbay in Raphael Varane oo difaac is leh in uu shabaqiisa ku weeciyo kubad uu soo laaday Serge Aurier.
Tottenham oo soo afjartay ku badin la'antii Wembley
Hadal haynta kubbadda cagta
Aubameyang iyo Omagbemi oo kali ah ayaa Afrika ka soo galay liiska tartanka abaalmarinta Fifa
Kooxda Real Madrid ee haysata Horyaalka Spain ayaa goosha barbaraha la timid ka hor intii aan loo dareerin nasashada qaybta koobaad, ka dib markii uu Cristiano Ronaldo gool dhaliyay siina xoojiyay in ahaanshaha ninka ugu goolal dhalin badan taariikhda koobka Champions League.